Izindaba - Ngabe Amashubhu Angalilinganisa Kanjani Ububanzi Bamasondo eTire?
Ngabe Amashubhu Angalilinganisa Kanjani Ububanzi Bamasondo eTire?
Amashubhu angaphakathi enziwe ngenjoloba futhi aguquguquka kakhulu. Ziyafana namabhaluni ngokuthi uma uqhubeka uzifaka umoya ziyaqhubeka zanda zize ziqhume ekugcineni! Akuphephile ukufaka amashubhu angaphakathi ngaphezu kwamabanga osayizi anengqondo futhi anconyiwe njengoba amashubhu ezoba buthakathaka njengoba enwetshwa.
Amashubhu amaningi angaphakathi azomboza ngokuphepha amasayizi wamathayi amabili noma amathathu, futhi lawa masayizi avame ukumakwa kushubhu langaphakathi njengosayizi abahlukene, noma akhonjiswe njengobubanzi. Isibonelo: Ishubhu langaphakathi lesondo le-trailer lingamakwa njenge-135/145 / 155-12, okusho ukuthi lilungele osayizi bamathayi angaba yi-135-12, 145-12 noma i-155-12. Ishubhu elingaphakathi lokugunda utshani lingamakwa njenge-23X8.50 / 10.50-12, okusho ukuthi lilungele osayizi bamathayi angama-23X8.50-12 noma ama-23X10.50-12. Ithubhu langaphakathi likagandaganda lingamakwa njengo-16.9-24 no-420 / 70-24, okusho ukuthi lilungele osayizi bamathayi abayi-16.9-24 noma ama-420 / 70-24.
INGABE UBULUNGISA BAMATHUBU ANGANGAPHAKATHI AYAFUNA? Ikhwalithi yangaphakathi yeshubhu iyahlukahluka kusuka kumkhiqizi kuya kumkhiqizi. Ukuhlanganiswa kwerabha yemvelo, injoloba yokwenziwa, ikhabhoni emnyama namanye amakhemikhali amakhemikhali anquma amandla amashubhu, ukuqina nekhwalithi yayo yonke. KwaBig Tires sidayisa amashubhu asezingeni elifanele avela kubakhiqizi abake bazanywa futhi bahlolwa eminyakeni edlule. Qaphela lapho uthenga amashubhu angaphakathi kweminye imithombo njengoba kukhona amashubhu asezingeni eliphansi kakhulu emakethe njengamanje. Amashubhu asezingeni eliphansi ahluleka ngokushesha futhi akubiza kakhulu ngazo zombili izikhathi eziphansi nangezinto ezithatha indawo yawo.
NGIYADINGA YINI IVEVI? Amaphayiphu eza ngezinhlobonhlobo nosayizi ukuze kuhlangatshezwane nezinhlobonhlobo zezinhlelo zokusebenza nokulungiswa kwamasondo. Kunezigaba ezine eziyinhloko ama-valve tube wangaphakathi angena ngaphakathi nangaphakathi kukodwa kunamamodeli wama-valve athandwayo ongakhetha kuwo: Ama-Valve Rubber Aqondile - I-valve yenziwe ngenjoloba ngakho-ke ayibizi futhi ihlala isikhathi eside. I-valve engu-TR13 ivame kakhulu, isetshenziselwa imoto, i-trailer, ama-quads, imishini yokugunda utshani neminye imishini emincane yezolimo. Inesiqu se-valve esincanyana nesiqondile. I-TR15 inesiqu se-valve esibanzi / esinamafutha amaningi ngakho-ke isetshenziswa emasondweni anomgodi omkhulu we-valve, imishini ye-agri emikhulu ngokwengeziwe noma i-landrovers. Ama-Valve Wensimbi Aqondile - I-Valve yenziwa ngensimbi, ngakho-ke inamandla futhi iqinile kunabalingani babo benjoloba. Zivame ukusetshenziselwa ukufaka umfutho ophakeme, futhi lapho kunengozi enkulu yokuthi i-valve ibanjwe / ishayiswe izingozi. I-TR4 / TR6 isetshenziswa kuma-quads athile. Okuvame kakhulu yi-TR218 eyi-agri valve esetshenziswa ogandaganda abaningi njengoba ivumela ukuqhuma kwamanzi. I-Bent Metal Valves - I-valve yenziwa ngensimbi, futhi ine-bend kuyo yamazinga ahlukahlukene. Ukugoba kuvamise ukugcina isiqu se-valve singangeni ezingcupheni lapho isondo liphenduka, noma ukuligwema lishaye irimu yamasondo uma isikhala sinqunyelwe. Zijwayelekile emalolini nasezintweni eziphatha imishini efana nezimfoloko, amasondo enqola kanye namasondo. Ama-forklifts ngokuvamile asebenzisa i-valve ye-JS2. Imishini emincane njengamaloli esaka isebenzisa i-TR87, kanti amaloli / amaloli asebenzisa ama-valve agobekile amade afana ne-TR78. Ama-Valve Womoya / Amanzi - I-valve engu-TR218 iyi-valve yensimbi eqondile evumela amanzi (kanye nomoya) ukuthi akhishwe kuyo ukuze kuniselwe amathayi / imishini ye-ballast. Zivame ukusetshenziselwa imishini yezolimo njengogandaganda.
AMATHUBU ANGANGAPHAKATHI OKUSETSHENZISWA KWEZINYE IZIMPAHLA ZOKUTSHEKA, IZIBHOBO ZOKUBHEMA OKWENGEZIWE Izinto zangaphakathi ziyizinto ezinhle kakhulu, futhi nsuku zonke sisiza ukweluleka abantu abazisebenzisela zonke izinhlobo zokusetshenziswa. Ngakho-ke noma ngabe udinga ithubhu elingaphakathi lokuntanta phansi emfuleni, ukwakha indalo yakho yesihle, noma ukuboniswa kwewindi lesitolo, khona-ke siyajabula ukukusiza. Sicela uxhumane nezidingo zakho futhi iqembu lethu lizokukhomba endaweni efanele. Njengesikhombi esisheshayo, nquma ukuthi ungathanda ukuthi igebe / imbobo maphakathi nethubhu ibe nkulu kangakanani (lokho kubizwa ngosayizi womugqa futhi kukalwa ngama-Inches). Ngemuva kwalokho, nquma ukuthi ubungathanda ukuthi bube bukhulu kangakanani ububanzi bethambo elifuthwe libe (ukuphakama kweshubhu uma ulimise-eduze kwakho). Uma ungasinika lolo lwazi singakweluleka ngezinye izinketho zakho. Sicela uxhumane nathi nganoma yiluphi usizo olwengeziwe kanye nolwazi.